बैतडीमा संकलन गरिएका यी हतियार कहाबाट आए? हेर्नुहोस के रहेछ खास कुरा ? २१६ थान हतियार सङ्कलन - TAJA KHAWAR
December 14, 2019 Taja Khawar समाज 0
बैतडी / प्रहरीले २१६ थान हातहतियार सङ्कलन गरेको छ । गृह मन्त्रालयको हतियार सङ्कलन गर्ने अभियान अन्तर्गत जिल्ला प्रहरी कार्यालय मातहतका प्रहरी इकाइ तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिको सो सङ्ख्यामा हातहतियार सङ्कलन गरिएको हो ।
६८ वर्षीय यी बृद्ध के यस्तो गरेर आज पक्राउ परे? हेर्नुहोस उनको यस्तो कर्तुत रहेको छ जसले उनि पक्राउ परे